Vaovao fampirantiana |
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 16-10-21
Tamin'ny 15 Oktobra, nanokatra ny lambam-baravarany tao amin'ny efitrano fampirantiana Pazhou ny fivoriana faha-120 an'ny Canton Fair. Nasaina i Grace mba hanana endrika miavaka amin'ity foara ity. Niorina tamin'ny lohataona 1957, fampirantiana ny entam-barotra any ivelany (Canton Fair) natao tany Guangzhou tamin'ny lohataona ...
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 16-10-11
Nanomboka ny 28 septambra 2016 ka hatramin'ny 1 oktobra dia nasaina handray anjara amin'ny fampiratiana indostrialy vatan-kazo iraisam-pirenena Vietnam faha-16 natao tao amin'ny Saigon Exhibition & Conference Center i Grace. Fampirantiana indostrialy vita amin'ny varotra iraisampirenena Vietnam dia fampiratiana indostrian'ny milina nasionaly miaraka amina internati ...
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 16-10-10
Ny 26 septambra 2016 ka hatramin'ny 30 septambra, ny fampirantiana ny Plastika Iraisampirenena China Columbia COLOMBIAPLAST 2016 dia notontosaina tamim-pahombiazana tao amin'ny Ivotoerana Fivoriambe sy Fampirantiana Iraisam-pirenena tao Bogota. Amin'ny maha fampisehoana manokana ny fampirantiana indostrialy lehibe indrindra ao Columbia, nahomby tamina ...
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 16-09-21
China Exposition Manufacturing Equipment International (izay antsoina hoe CIEME) dia fampirantiana fitaovana lehibe indrindra eto an-toerana. CIEME, miaraka amin'ny lohahevitra "fanamboarana fitaovana sy teknolojia avo lenta & vaovao", dia notontosaina tamim-pahombiazana nandritra ny fivoriana 14 hatramin'ny 20 ...
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 16-08-11
Manomboka amin'ny 19 Oktobra 2016 ka hatramin'ny faha-26, ny fampirantiana ny indostria vita amin'ny plastika lehibe indrindra (K Show 2016) dia hatao any Dusseldorf, Alemana. Amin'izay fotoana izay dia hampiseho ireo milina farany amin'ny K Show i Grace. Manasa anao tamim-pahatsorana izahay hitsidika ny trano heva misy anay - Dusseldorf International Exhibition Hall ...
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 16-01-21
Tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia nanatrika fampirantiana indostrialy plastika lehibe indrindra sy manan-kery indrindra i Grace tany amin'ny faritra afovoany atsinanana sy avaratra - Plastex. Nandritra ny fampirantiana, dia naneho extruder kambana kambana conical vaovao miaraka amin'ny "atiny teknolojia avo lenta sy haavon'ny" i Grace.
Fampirantiana ny fitaovana iraisam-pirenena any Sina
avy amin'ny admin tamin'ny 15-09-21
Tamin'ny volana septambra 2015, taorian'ny fizahana marobe tao amin'ny departemanta mifandraika amin'ny tanàna, Grace dia nofidian'ny governemantan'ny tanànan'i Zhangjiagang mba ho hany milina plastika nasaina tao amin'ireo ozinina 340 tao an-tanànantsika, nanatevin-daharana ny China Top Grand International International Exposition! Nandritra ny fampirantiana ...
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 15-06-21
GRACE Machines dia nanatrika ny FEIPLAST tamim-pahombiazana tamin'ny 4 – 8 Mey 2015 Nandritra ny taona vitsivitsy nivoatra tany Amerika atsimo, ny 50 gathered stand dia nanangona mpanjifa antitra maro ary nahasarika mpanjifa vaovao maro. Indrindra fa ny fantsom-pantsakan'ny PVC, ny mombamomba azy ary ny fantsom-bozaka tafo dia voamarina mafy. Nahazo ...
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 15-06-11
Ny CHINAPLAS 2015 dia nifarana tamim-pahombiazana tany Guangzhou tamin'ny 23 Mey! Taorian'ny fiomanana am-pitandremana ny fampirantiana dia nampiseho moramora fitaovana dimy i Grace: extruder visy tokana mahomby GM60 / 38 extruder, SJZ80 / 156 extruder kôlika kambana avo lenta, 160 karazana vovoka vy tsy misy fangarony ...